मन्त्रीले भनेको नमान्दा महानिर्देशकलाई स्पष्टीकरण ! – Everest Dainik – News from Nepal
मन्त्रीले भनेको नमान्दा महानिर्देशकलाई स्पष्टीकरण !
काठमाडौं, भदौ ३१ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले सुनसरीस्थित धरान विमानस्थल बनाउन केही व्यक्तिको जग्गा नकिनिदिएपछि महानिर्देशक सञ्जीव गौतमलाई स्पष्टीकरण सोधिएको खुलेको छ । प्राधिकरणको चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा यती इन्कर्पोरेट कम्पनीको नाममा रहेको करिब ७ बिघा जग्गा किन्न बजेट नछुट्याएपछि गौतमलाई हटाउन चलखेल सुरु भएको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । विमानस्थलका लागि ७० हेक्टर जग्गा आवश्यक पर्छ ।
शेर्पाले २०६९ सालतिर निकै सस्तो मूल्यमा उक्त जग्गा किनेका थिए । सो जग्गा उनलाई ठूलो नाफा हुनेगरी प्राधिकरणको नाममा किनाउन गौतममाथि राजनीतिक दबाब परेको छ । यसरी जग्गा बेचाउन सकेको भए नेपाल आयल निगममा भएको जग्गा घोटाला काण्डको पुनरावृत्ति हुने थियो । स्रोतका अनुसार उक्त जग्गा किनाउन नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमका अध्यक्ष रहेका संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री विजय गच्छदारको दबाब छ । मन्त्री देव पनि लोकतान्त्रिक फोरमका तर्फबाट सरकारमा सामेल छन् ।
ट्याग्स: Nagarik Uddyan Pradhikaran